DEG DEG AH: Isimadda gobalada Sool & Cayn oo goor dhaw ku dhawaaqaya go’aamo adag | Marqaan News Agency
DEG DEG AH: Isimadda gobalada Sool & Cayn oo goor dhaw ku dhawaaqaya go’aamo adag
Published on January 11, 2018 by dahir · 6 Comments
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Buurawadal oo u jirta masaafo yar magaalada Garoowe ayaa sheegaya in ay halkaas kulan deg deg ah ku leeyihiin Isimada dhaqanka ee beelaha daga gobalada Sool & Cayn oo ay uga wada hadlayaan xaaladdaha soo cusboonaaday.
Wararku ayaa sheegaya in ay Isimadan cadeyn doonaan mawqifkooda ku aadan dagaalada hadda soo cusboonaady iyo jawaabta ugu haboon ee laa bixin karro, sidda ay sheegayaan wararku.
Sidaas oo kale xogaha ayaa cadeynaya in ay Isimadan baaq u diri doonaan wakiilada caalamiga ah, kaas oo ku qotoma xaaladdaha Isbedelaya ee gobalkaas iyo sidda ay uga soo horjeedaan doonista Somaliland.
Xiisada colaadeed ee kataagan gobalka Sool ayaa sii kordhaysa, waxaana labada dhinacba ay hadda geeyeen goobaha dagaalka baabuurta gashaman oo u muuqata kuwa dagaal buuxa loo diyaariyey.
Cida soo duushey , ee woqooyi ka timid. waa ay ku jabeen, meydkoodaa daadsan, waana laga saarayaa meel kasta xaaraanta. war maxey is moodeen, dabadhifyada dhulbahante ee ay wataan, iyagana sgaqo ayaa laga qabanayaan , waa qabaqaadyaal aad u liita.
Futa La Riday
Tukaraq ka waran, goormaad qabsnaaysaan?!
Salaantaa mid la midda. MBA shaqo fiican buu hayaa Jabuutina si fiican baa laydu afgartay ee yaa beenta kuu sheegay.
Dagaalka sool iyo ceyn waxaa ku dhimanaya waa dhulbahante oo keliya kuma dhimanayaan wiil Isaaq ah iyo wiil Majeerteen ah taasna waxaa keentay caqli xumida Dhulos.
Marwo Barwaaqo Salaan Sharaf Inaabti ayaan hawada ADDIS ABABA kuu soo marinaya waxaan jooga BOLLO/Addis.
Adeerkaa Muuse Biixi Djibouti wuu ka cadhooday Ictiraaf la’aanta ay la daba joogaan Maamulka somaliland ?
kuwa hader buro wadal ku shiraya wax waxtar cidna kama helayso,wax tar aay mar hore gari lahayen ciyow wagi bareyey.
Buurawaxal laftarkeeda ciidankayaga ya gaadho.